I-Old Pottery e-Etty Bay - I-Airbnb
I-Old Pottery e-Etty Bay
Indawo enokuthula, evumela izingane ukubaleka engaphambili ne-panoramic yangaphambili ye-Coral Sea.
Leli fulethi eliphansi liwukuthuthukiswa kabusha kwekhwalithi ye-Old Pottery yango-1970 futhi linekhishi eliningi labalingiswa + labapheki.
Uhambo olufushane oluya emabhishi.
I-Old Pottery ithatha yonke izinga eliphansi elizimele lendlu. Indawo yokuhlala yomnikazi phezulu ingase itholakale njengesengezo ngohlelo olukhethekile.
Ukuze ubone umaki wendawo kumephu, sesha i-"C3VQ+9W Mourilyan"
Lesi sakhiwo bekungesomndeni kusukela ngeminyaka yawo-1950 lapho umgwaqo u-Etty Bay uvalwa futhi iSurf Life Saving Club iyishede likathayela.
Le ndlu yamanje yayakhiwe ngokuqinile kukhonkolo umakhi wase-Austrian ngeminyaka yawo-1970 enendawo yokuhlala ehlangene phezulu kanye nezitsha zobumba ezisebenza kahle ezisebenza phansi.
Indlu ingamamitha angaba ngu-15 ngaphezu kolwandle futhi iseduze ngokwanele emanzini ukuzwa amagagasi olwandle futhi ngezinye izikhathi ibona amahlengethwa nezimfudu.
Muva nje, i-Old Pottery yavuselelwa ngokuzwela njengendawo yokuhlala ezimele yaba sezingeni eliphezulu.
Izithombe zomlando, umlando onemininingwane eminingi, kanye nokukhethwa kwezimbiza zikaJean Markwell kuboniswa endaweni yokudlela.
Ikhishi le-Old Pottery lihlome kahle kakhulu, futhi ukunethezeka okujwayelekile nezinye izinsiza zifanelekile ukuvakasha kwesikhashana okuphakathi kwamalungu omndeni noma izivakashi.
Kukhona ukusetshenziswa okukhethekile kwe-double carport ene-headroom yama-rack ophahleni alayishiwe.
Izindawo zokupaka izimoto kanye nendawo yokungena efulethini eliphezulu/ezansi zizimele.
Kunesikhala sokupaka isikebhe esine-trailer esingafika ku-6.5 amamitha ubude phambi kweshede lesikebhe lapho kukhona nendawo yokubeka ipayipi.
Kukhona ishawa yangaphandle eduze kwe-carport.
Ukuqashwa kwe-Airbnb kusekelwe efulethini le-Old Pottery ngentengo ekhonjiwe.
Ngezinye izikhathi, amalungu omndeni angase ahlale endaweni yokuhlala ephezulu kodwa ngokuvamile, izivakashi zizihambela zodwa.
Uma kukhona umndeni okhona, sizokwazisa kusenesikhathi. Kungaba kuhle ukuhlangana.
Kungase kwenzeke ukuqasha yonke indlu ngelungiselelo elikhethekile. Indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu ivuselelwe kancane futhi isenezici ezithile zasekuqaleni zawo-1970.
Asiqashi ephathini/eqenjini elingaphezu kwelilodwa ngesikhathi.
Sicela uqaphele ukuthi i-Etty Bay imenyezelwe umkhandlu wendawo njengendawo engenazo ingilazi nezinja.
Ama-Cassowaries azulazula endaweni futhi oyedwa uvakashela indlu ngezinsuku eziningi.
Ezinye izilwane zasendle zendawo zihlanganisa, amaxoxo, i-goanna, i-wallaby, i-skinks, izimvemvane eziningi, izinyoni, nezinambuzane, i-gekkos, i-ecidna njll. Ukuphila kwasebusuku kuhlanganisa amalulwane amancane, ama-Curloos, amabhu (i-Atlas Moth ngezinye izikhathi), kanye nezilwane ezincelisayo zasehlathini lemvula ezincane ezifana nama-Bandicoots. .
Ibhishi elikhulu lase-Etty Bay elikhangayo livikeleke kahle uma liqhathaniswa ne-avareji yolwandle lwase-Queensland, futhi linezihlahla ezinomthunzi ofika endaweni ephakeme kakhulu yamanzi. Indawo evalekile yenethi yokubhukuda ephephile isethwa ngezikhathi ezithile zonyaka.
I-Etty Bay uhambo lwangempelasonto oludumile kubantu bendawo.
Ama-Cassowaries kanye nolwandle oluhlanzekile yizona ezikhangayo ezinkulu. I-van park idumile futhi abantu abaningi bendawo baya e-Etty Bay ngezimpelasonto nangamaholide ezikole. Kunezinketho eziningi zohambo losuku olumnandi olusuka e-Etty Bay. I-Mission Beach iwuhambo lwemizuzu engama-40, i-Atherton Tableland neCairns ziqhele ngehora.
USusan noGrant bahlala eCairns futhi bangasiza ngolwazi lwendawo.
Amanye amalungu omndeni, uJohn, uKarina no-Ellie, akude kakhulu kodwa qiniseka ukuthi omunye wethu uzokwazi ukusiza ukuxazulula noma yiziphi izinkinga.
Uma sisendlini, sithanda ukusebenzelana nezivakashi.
Amanye amalungu omndeni, uJohn, uKarina no-Ellie, akude kakhulu kodwa qiniseka ukuthi omunye wethu uzokwazi u…